Mpanamboatra sy mpamatsy vovo mangatsiaka China Steamed Food | ALLCOLD
Famaritana fohy momba ny vacuum Food Cool Steam
Miorina amin'ny trangan-javatra ny teknolojia fa manomboka mangotraka amin'ny hafanana ambany ny rano rehefa mihena ny tsindry. Ao amin'ny cooler vacuum, ny tsindry dia ahena amin'ny haavon'ny rano manomboka mangotraka. Ny dingan-javatra mangotraka dia manaisotra hafanana amin'ny sakafo. Vokatr'izany, ny sakafo dia azo tony amin'ny alàlan'ny fihenan'ny tsindry ao amin'ny efitrano fantsona.
Amin'izany fomba izany, ny sakafo masaka dia azo zakaina amin'ny hafanana avo ka hatramin'ny 10 ℃ ao anatin'ny 20 ~ 30min, ny sakafo voahandro dia azo zakaina avy amin'ny maripana ambony ka hatramin'ny 20 ℃ ka hatramin'ny fonosana mety ao anaty 10-20min.
Hafainganam-pandeha 1.Fast haingana. Ny sakafo masaka nangatsiaka hatramin'ny 10 ℃ dia mila 20-30 fotsiny, ny sakafo nandrahoina nampangatsiahina hatramin'ny 20 ℃ ao anatin'ny 10-20min.
2.Cooling fanamiana. Eo ambanin'ny banga, ny sakafo mangatsiaka hatrany amin'ny fotony ka hatrany ambonin'ny.
3.Fangatsiahana dingana roa hampihenana ny fahaverezan'ny rano sakafo. Manomboka amin'ny hafanana avo ka hatramin'ny 60 ℃, ny sakafo dia hangatsiaka haingana hisorohana ny fitomboan'ny bakteria haingana, ny fitehirizana faharoa kosa dia hampihena ny fampangatsiahana hampihenana ny fahaverezan'ny etona, ary ny fanatsarana ny tsiron'ny sakafo.
4.Machine vita amin'ny vy tsy misy fangarony, fenitra sy fidiovana ho an'ny fahadiovana ara-tsakafo mety tsara.
5.Fahombiazana avo sy fitsitsiana angovo.Fangatsiahana dingana roa sy paompy peratra rano manokana mba hampihenana ny vidin'ny fandehanana.6. Fiasa bokotra iray sy famahana olana amin'ny rafitra fanampiana.
Ireo votoatin'ny volo mangatsiaka kokoa
1. Efitra fandraisam-bahiny - Mba hamenoana ny sakafonao vita amin'ny vy vy.
2. Vacuum system - Mba hanaisotra ny rivotra ao anaty efitrano fandraisam-bahiny, avy eo mangatsiatsiaka ny sakafo.
3. Rafitra fampangatsiahana - Mba hisamborana ny etona ao amin'ity efitrano ity mba hiantohana ny fizotran'ny fampangatsiahana tsy tapaka.
4. Rafitra fanaraha-maso --- Mba hifehezana sy hanehoana ny toe-piainan'ny cooler vacuum.
Sehatra fampiharana lehibe ho an'ny vacuum cooler
1. Sakafo masaka: legioma nandrahoina, holatra, hena, henan-kisoa, henan'omby, trondro, makamba sns.
2. Sakafo namboarina: mofomamy volana, mofomamy, mofo sns.
3. Sakafo endasina: vary nendasina, baolina nendasina, lohataona sns.
4. Sakafo amin'ny sotera: vary etona, paty, dumpling, sushi, conserve, bun etona sns.
5.Stuffing sakafo: vary dumpling, fonosina sakafo nomanina, volana mofomamy sakafo sns.
Safidy fampangatsiahana vacuum ho an'ny sakafo vonona Talior
Safidy 1.Condensor: a. Condensor mpanala rivotra b
2. Safidy anatiny: a. Varavarana savily mahazatra b. Varavarana mitsivalana mitsivalana
3.Fitambarana masinina namboarina: a. Masinina mifangaro b. Masinina voazarazara
Safidy 4.Refrigerant: a.R404a b.R407c
Previous: Maso mangatsiaka ao anaty bakery
Manaraka: Sakafo masaka masaka masaka